Archive de l'auteur | NewsMada | Page 822
Fiaraha-miasa : hampian’ny japoney ny Bianco
Par Taratra sur 15/10/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nanome toky ny hanampy sy hanohana ny Bianco ny fitondrana japoney. Nivoitra izany tamin’ny fitsidihan’ny ambasadaoro vaovao an’ity firenena ity, Ichiro Ogasawara, ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean Louis ny alakamisy teo teny Ambohibao. Anisan’ny hitondran’izy ireo ny anjara birikiny ny fametrahana ny paikady vaovao hiadiana amin’ny kolikoly, ho an’ny taona 2015-2015. Nohamafisina tamin’izao fihaonana […]
Vokatra vaovao Big : zava-pisotro ho an’ny rehetra
Par Taratra sur 15/10/2016 Economie, NS Malagasy
Fotokevitry ny orinasa Malagasy Boissons sy ny vondrona AJE, mamokatra ny zava-pisotro vaovao Big, ny hanapariahana karazana tolotra samihafa ho an’ny mpanjifa. Manana kalitao tsara nefa takatry ny fahefa-mividin’ny Malagasy rehetra, hatrany ambanivohitra mihitsy aza ny ranomboankazo Big. Nampahafantarina ny besinimaro, omaly sy ny alarobia teo, ny zava-pisotro ranomboankazo vaovao Big, vokarin’ny orinasa Malagasy Boissons […]
Jono : ferana ny vokatra drakaka azo aondrana
Par Taratra sur 15/10/2016 Divers, NS Malagasy
Nandray fanapahan-kevitra ny minisiteran’ny Jono sy ny ranomasina fa ferana ho 4.250 t ny drakaka (crabes) azo aondrana any ivelany. Tombanana ho 8.000 t isan-taona ny azon’ireo mpanjono amin’io vokatra io, nefa tsy misy afa-tsy 20 % monja mijanona ho an’ny tsena eto an-toerana. Lasa tompony mangataka atiny indray isika, aondrana any ivelany ny ampahany […]
Ambohimangakely : jiolahy sivy mpanao fanafihana mitam-piadiana voasambotra
Par Taratra sur 15/10/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tratran’ny zandary ny andian-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana eny Ambohimangakely. Andro maromaro ny nikarohana azy ireo vao tratra. Olona sivy voasambotry ny zandary avy any Ambohimangakely, voalaza fa jiolahy raindahiny mpanao fanafihana mitam-piadiana. Misy amin’ireo anefa, mpandray entana halatra, araka ny fanazavana. Nambaran’ny zandary fa tompon’antoka tamin’ny fanafihana nitranga tany Ambohitrombihavana ireo, ny 23 aogositra sy […]
« Tsiaro an’i Om-Gui » : vonona ny rehetra, ny mpijery sisa andrasana
Par Taratra sur 15/10/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Seho goavana indrindra eto an-dRenivohitra amin’ity faran’ny herinandro ity ! « Tomombana tanteraka ny fikarakarana rehetra hatramin’izay heverina ho bitika indrindra. Ny fahatongavan’ny mpijery izay inoana fa ho marobe sisa andrasana ». Io ny namintinan-dry zareo avy ao amin’ny Veto, mpikarakara ilay seho goavana « Tsy misy toa anao » ho fahatsiarovana an’i Om-Gui, rahampitso eny amin’ny Coliseum Antsonjombe. Manomboka amin’ny […]
Oniversite Ankatso : profesora roa notolorana mari-boninahitra
Notoloran’ny fanjakana mari-boninahitra “Officier de l’ordre national” ny profesora Raharinirina Rabaovololona Lucie sy ny profesora Ralalaoherivony Baholisoa Simone, samy mpampianatra mpikaroka ao amin’ny ALSH (Arts, Lettres et Sciences Humaines) Ankatso. Notontosaina, omaly, ny lanonam-panolorana izany teny amin’ny Amphitheatre Degs, omaly. Nifanindran-dalana tamin’izany koa ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny voka-pikarohana, ny rakibolana rakipahalalana Vitasoa. Anisan’ny […]
Nosy Be : rongony 4, 5 kilao sy volabe sarona
Saron’ny polisin’ny Paf tao amin’ny seranana Nosy Be ny rongony milanja 4 kilao sy 500 grama, niampy vola 575 000 Ar tamina lehilahy iray. Voalazan’ny polisy fa avy any Ambatoharana Atsimo, distrikan’Ambilobe, io olona io, saika hiditra any Nosy Be hitondra ireo rongony ireo izao sarona izao. Manao hetsika iadiana amin’ny karazana fanondrana an-tsokosoko toy izao […]
Re hatreto an-dRenivohitra : nihovitrovitra ny tany, omaly
Nihovitrovitra 2 segondra ny tany eto Antananarivo, omaly tokony ho tamin’ny 3 ora sy 51 minitra. Voalaza fa tany Soavinandriana Itasy tany ny foiben’ity horohorontany nitranga omaly ity. Tany an-toerana no fantatra fa naheno bebe kokoa io fihetsehan’ny tany io, raha mitaha ny teto an-dRenivohitra. Maro tamin’ny olona, tsy nahare izany akory, raha tsy efa […]
Jery taratra… herinandro : tsy ahoam-bahoaka izay atao…
Tsy mampiraika ny maro ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny varotra na ny Comesa. Ny fisian’ny mpitandro filaminana mameno tanàna, Ivato sy ny manodidina, no nanaitra ny sasany: maninona no tsy halefa miady amin’ny dahalo ireny? Misy tsy mino ny hoe niala ny Sinoa mitrandraka volamena ao Soamahamanina. Mbola misy fitaovana vaventy eny an-toerana: miandry ny […]
Ivandry Tanàna : nitroatra noho ny fahatapahan-drano ny vahoaka
Mihamiakatra hatrany ny hatezeran’ny olona manoloana ny delestazy lavareny miseholany isan’andro. Nanao fihetsiketsehana ny mponina eny Ivandry Tanàna, omaly hariva, naneho hatezerana amin’ny tsy fisian-drano. Nitsoka kiririoka manerana ny tanàna izy ireo ho fanairana ny tompon’andraikitra. Nilaza ireo mponina nanao fihetsiketsehana fa efa tsy laitra intsony ny ataon’ny Jirama amin’ny toe-javatra tahaka izao satria mila […]
Fitondrana… tsy misy fototra
Par Taratra sur 15/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
…Fa tsy hoe tsy misy fotony. Ndrao tafintohina ny mpitsambikimbiki-mikimpy am-pamindrana, na manao an-kinarinarin-dava. Efa hatrany am-piandohan’izao Repoblika IV izao ny kitsapatsapa, kijabajaba… Lazaina ho demokratika ny fifidianana, nefa nisy kandidà tsy navela hirotsa-kofidina, ohatra. Mbola adihevitry ny mpandinika sasany ny amin’ny voka-pifidianana marina, ny kandidà mpisolo toerana voafidy, ny tsy fiomanana hitondra firenena… Nampiharihary […]
Ampasimbe -Tsy neken’ny vahoaka ny ben’ny Tanàna HVM : dimy no maty, nodoran’ny olona ny fiangonana Rhema
Par Taratra sur 15/10/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nivadika ho korontana sy savorovoro niafara amin’ny fahafatesan’olona ny fikasana hametraka ny ben’ny Tanàna vaovao ao amin’ny kaominina Ampasimbe Manatsatrana, omaly. Vokany, olona dimy maty voatifitra, sivy hafa naratra. Ankizivavy iray mpianatry ny lycée sy raim-pianakaviana iray ny maty amin’ireo dimy voatifitry ny sivily mpiambina ny ben’ny Tanàna vaovao, Honoré Jacob. Ny telo […]
Loi de finances 2017 : un dernier briefing pour les sénateurs
Par Taratra sur 14/10/2016 NS Français, Opinion
Les sénateurs en pleins préparatifs, avant le début de la deuxième session parlementaire ordinaire. En effet, députés et sénateurs auront à examiner le projet de loi de finances pour l’année 2017. D’ailleurs, un séminaire sur le sujet, assisté de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (Eisa) a débuté hier au Sénat à Anosy […]
Basikety N1A lehilahy : resin’ny Ascut ny Challenger
Par Taratra sur 14/10/2016 Divers, NS Malagasy
Nanomboka, omaly tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny andro voalohany amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, sokajy N1 A lehilahy sy vehivavy. Araka ny fandaharam-potoana, ny lehilahy no nisantatra ny fihaonana ka lalao dimy avy hatrany no voalahatra, tamin’izany. Anisan’ny vokatra nandrasan’ny rehetra ny fihaonan’ny Ascut Toamasina sy ny Challenger Analamanga. Lavon’ny Ascut, tamin’ny […]
Kitra – Barea Academy : nanakiana ny fahaizan’ireo mpilalao i Roger Fleury
Par Taratra sur 14/10/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nanakiana ireo mpilalao mandrafitra ny Barea Academy ilay Frantsay, Roger Fleury, ka nilaza fa tsy misy mpilalao misongadina sy miavaka, manan-talenta ambony na iray aza, amin’izy 25 mirahalahy nantsoina. Fanakianana ireo mpilalaon’ny Barea Academy avy hatrany, no nataon’i Roger Fleury. Nambarany fa tsy misy manana talenta ambony amin’ireo ao anatiny. Tsy mahafa-po azy koa ny […]
“Mbike Adventure” : mbola nandresy i Hasina sy i Emile
Nitohy, omaly, ny dingana faharoa, eo amin’ny fifaninanana “Mbike Adventure”. Ny fifaninanana ho an’olon-droa hatrany aloha ny nataon’ireo mpifaninana. Mbola nisongadina indray, tamin’ity, ny ekipa nisy an-dRandrinantenaina Emile sy Rakotonirina Hasina, izay nandrombaka ny fandresena fanindroany. Ora 2 sy 31 mn 44 s ny nahavitan’izy ireo ny hazakazaka. Mbola izy mirahalahy hatrany izany no misalotra […]
Par Taratra sur 14/10/2016 En Bref, NS Malagasy
Halevina anio, Ikotoniaina. Araka ny vaovao nampitain’ireo havana sy namany, afaka manao veloma farany azy ireo maniry hanao izany, manomboka amin’ny 8 ora maraina, eny amin’ny kianjan’ny Kanto Mahamasina. Aorian’izay, hoentina hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ao amin’ny FJKM Anosiarivo, alohan’ny hametraha azy ao amin’ny fasan-drazany ao Anosiarivo ihany Hetsika goavana indrindra, amin’ity faran’ny herinandro ity, ny fampisehoana […]
Literatiora : lasan’i Bob Dylan ny « Prix Nobel »
Par Taratra sur 14/10/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Notanterahin’ny Akademia any Soeda, omaly, ny fanolorana ilay loka fanta-daza, « Prix Nobel ». Tsy nampoizina ! Lasan’i Bob Dylan, mpanoratra, mpihira ary mpitendry, teratany amerikanina sady fanta-daza amin’ny mozika « folk », ny « Prix Nobel » amin’ny sokajy literatiora. « Nitondra aina vaovao eo amin’ny mozika amerikanina, tamin’ny alalan’ny endri-panoratana poezia, i Bob Dylan », hoy ny sekretera jeneralin’ny Akademia any Soeda, […]
Fanabeazana – Kolontsaina malagasy : nitombo iray ny foibe fampianarana momba ny valiha
Mahay mozika ny Malagasy ! Tsy ampy anefa ny talenta voajanahary raha tsy ampiana fianarana, indrindra amin’izao vanim-potoana izao. Antony iray nananganana foibe fampianarana momba ny valiha etsy amin’ny IFR Ankadifotsy izany. Rehefa momba ny valiha, hampianarina ao avokoa. Anisany goavana indrindra amin’izany ny fampianarana mitendry valiha miaraka amin’ny solfezy. Fantatra fa hotanterahina, afaka volana vitsy […]
Tsingerintaon’ny 14 oktobra 1958 : hadino na very hasina ny maha Repoblika an’i Madagasikara
Par Taratra sur 14/10/2016 NS Malagasy, NS-Politique
58 taona ny nijoroan’ny Repoblikan’i Madagasikara. Tsaroana sy mbola misy hasina ve? Famakafakana… 14 oktobra 1958-2016. 58 taona lasa izay no nijoroan’ny Repoblikan’i Madagasikara. Efa zary hadino na very hasina ny maha Repoblika an’i Madagasikara? Tsy tsaroana amin’ny fomba ofisialy intsony io vanin-tantara io. Tamin’ny faha-50 taona aza, noraran’ny préfet de police, Antananarivo Renivohitra, ny […]
120 taona izay : notifirina Rainandriamampandry
… Nikoy fa tsy naharesy ny tafika frantsay tamin’ny ady voalohany ny tao Mahajanga raha tsy nanaiky kosa Andriamampandry sy ny tariny, namahatra tao amin’ny mandan’i Farafaty Toamasina nandritra ny roa taona. Nisy fifampiraharahana nifanaovana tamin’ny Frantsay taorian’izany saingy notsipahiny izany… Vaky indray ny ady faharoa ny 1894… Tsy nahatohitra azy ireo ny Frantsay ka […]
Ambatondrazaka : manjaka ny delestazy
Par Taratra sur 14/10/2016 Economie, NS Malagasy
Voafetra avokoa ny jiro sy ny rano eto Ambatondrazaka. Tsara tantana foana anefa izany hatramin’izay. Tsy àry nahafantatra izany delestazy izany ny mpanjifan’Ambatondrazaka. Hany nisy, ny fanadinoan’ny foibe any Antananarivo namoaka ny tapakila hivoahan’ny solika, ka nahatara ora vitsy ny firehetan’ny jiro indray mandeha. Indraindray kosa vao mba tsy mahazo ny rano ny mpanjifa. Saingy […]
BNI Madagascar : tohanana ny indostria sy ny mpiasan’ny minisitera
Vita, omaly, ny fifanarahana eo amin’ny banky BNI Madagascar sy ny minisiteran’ny Indostria ary ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. « Toy ny fahavononan’ny BNI manampy ny indostria ny hanampiany ny mpiasan’ny minisitera », hoy ny tale jeneraly, Alexandre Mey. Notsiahiviny ny fiaraha-miasan’ity banky ity sy amin’ny Federasiona Antenimieran’ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara (FCCIM), tamin’ny […]
Fanadiovan’ny tsena : hentitra ny Das
Par Taratra sur 14/10/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tonga namaly ny antson’ny sampan-draharaha misahana ny fampianarana ny fahaiza-miaina ao amin’ny Das ireo mpivarotra aman-jatony eny Isotry ny talata teo. Araka ny fanaon’izy ireo, hanaovana ny fanentanana isaky ny talata ny mpivarotra eny Isotry. Eny amin’ny tsena Anosibe ny alarobia ary anjaran’ny tsenan’ny Coum 67 ha ny alakamisy. Fanentanana ny tsenan’Ambohimanarina kosa ny zoma. […]
Fanondranana entana : nitombo 16% ny vokatra nankany Japana
Nihena ny entana naondran’i Madagasikara nankany Japana, ny taona 2011 sy ny 2012. Nitombo 16% kosa izany nanomboka ny taona 2013 hatramin’ny 2015. Nahatonga izany ny fitomboan’ny fanondranana jirofo, lavanila ary ny lamba sy ny akanjo. Nitombo avo roa heny ny tetibidin’ny vokatra naondrana nankany amin’ity firenena ity, ny taona 2013-2014, toy ny lavanila, ny […]
« Précédent 1 … 820 821 822 823 824 … 1 066 Suivant »